Kali Trozona Mitambatra - Famolavolana
Trozona Mitambatra Ity troli ity dingana dia iray amin'ireo singa an'ny andian-dahatsoratra K ho an'ny marika QUISO. Vita vita amin'ny hazo matevina tsara tarehy izy io. Ny famolavolana matevina sy matevina dia mety amin'ny fisotroana toaka amin'ny latabatra fisakafoanana. Ho an'ny fiarovana sy ny hatsaran'ny tolotr'asa, mihantona amin'ny gony ny solomaso, tsy voafehin'ny takelaka tsy misy loaka ireo tavoahangy, ny kodiarana indostrialy dia miloloka tsara sy mangina.
Anaran'ny tetikasa : Kali, Anaran'ny mpamorona : Patrick Sarran, Anaran'ny mpanjifa : QUISO.
Trozona Mitambatra Patrick Sarran Kali